ग्यालक्सी ए and१ र ग्यालक्सी ए of१ को क्यामेरा र ब्याट्रीहरू फिल्टर गरिएका छन् Androidsis
सामसुले यस वर्ष यसको ग्यालेक्सी ए रेंज विस्तार गर्न जारी राख्नेछ। र पक्कै पनि, यदि उसले ग्यालक्सी जे श्रृंखला त्याग्यो यसमा र ग्यालक्सी एममा ध्यान केन्द्रित गर्न? यसैले हामी आउँदै गरेको महीनहरु मा स्मार्टफोन को परिवार को धेरै उपकरण प्रक्षेपण हेर्न को लागी जारी राख्नेछौं।
यस परिवारको दुई भागका मोबाइलहरू हुन् ग्यालक्सी ए and१ र ग्यालक्सी ए 31१। दुबै नामहरू धेरै महिना अघि नै प्रकट भइसकेका थिएसाथै तपाईंको सम्भावित क्यामेरा। यद्यपि, अब हामीले नयाँ डाटा प्राप्त गरेका छौं जुन यसको फोटोग्राफिक सेक्सन र ब्याट्रीहरूसँग गर्नुपर्दछ, केही हदसम्म विगतका रिपोर्टहरूमा भनिएको थियो विरोधाभासपूर्ण।
नयाँ जानकारी मूल रूपमा जी पोर्टल द्वारा साझा गरिएको छalaxyClub। त्यहाँ यो संकेत छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए १ सँग क्यामेराको खण्ड 31 48 MP को मुख्य शूटरले एकीकृत गर्नेछ, जुन १ MP MP सेन्सरको भन्दा ठूलो सुधारको रूपमा दिइन्छ ग्यालेक्सी A30। यो उपकरणसँग म्याक्रो फोटोका लागि MP MP सेन्सर पनि हुनेछ, प्रकाशन भन्छ। तसर्थ, एक डुअल क्यामेरा भनेको मध्य-दायराले के ले ल्याउँदछ।
यसका अतिरिक्त यो पनि उल्लेख छ कि ए ,5,000,००० mAh क्षमताको ब्याट्री यो एक हो जुन मोडेलको हुड मुनि राखिनेछ। यस्तो क्षमता र हामी पहिले नै यसको पूर्ववर्ती ग्यालेक्सी ए of० को बारेमा जान्दछौं किनकी यसमा युएसबी-सी पोर्ट हुन्छ र द्रुत चार्जिंगलाई समर्थन गर्दछ।
ग्यालक्सी ए १ शटमा भन्दा राम्रो हुनेछ ग्यालेक्सी A40. यो नोट गरियो कि यो एक रियर क्यामेरा प्रणालीको साथ आउँदछ जुन MP 48 MP को मुख्य सेन्सर र २ MP म्याक्रो क्यामेराको सुविधा प्रदान गर्दछ। अर्को ट्रिगर पनि यस कम्बोमा थप्न सकिन्छ, तर उल्लेख गरिएको छैन। उपकरणको अगाडि क्यामेरा समीक्षा गरियो; यो २ MP MP फोटो खिच्न सक्षम छ। पालैपालो, यो संग ब्याट्री पनि हुनेछ2mAh।
ग्यालक्सी एस २० अल्ट्राको फ्रन्ट क्यामेरा m० mpx हुनेछ
अन्य सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरूको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन, यसको मूल्य निर्धारण र उपलब्धता विवरणमा धेरै टाढा छ। यद्यपि यो सुरूवात पछि हुनेछ ग्यालक्सी S20 श्रृंखला कि हामी उनीहरुलाई प्राप्त गर्दैछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए and१ र ग्यालक्सी ए 31१: यी क्यामेरा र ब्याट्रीहरू छन् उनीहरूले देखाउँछन्